chamilion iripo mukati mefoni
Tiri kukomberedza iyo yakanaka mitambo yeApple iwe yaunogona kutamba.
Kune mazana ezviuru zveapps kuGoogle Play Store, uye mazhinji acho magemhu. Muchokwadi, mitambo iripo so inozivikanwa kuti ndiyo yekutanga tabu yaunoona iwe paunovhura iyo app.
Kana iwe uchitsvaga yakanakisa mitambo inowanikwa paGoogle Play Chitoro, wauya kurudyi nzvimbo. Kuita kuti zvive nyore kuwana, isu takakamura runyorwa urwu muzvikamu zvisere, izvo iwe zvaunogona kuwana mune inobatsira bhendi rinokutora iwe rakananga kune iro peji raunosarudza.
Kunyangwe iwe uri mutsva kuApple uye uchida mimwe mitsva, mitambo mitsva kuti utange kuvaka raibhurari yako yeGoogle Play, kana kungotsvaga mitambo yazvino yemaitiro inokodzera nguva yako nekutarisisa, iyi ndiyo mitambo yeakanakisa yeApple iwe yaunowana chaiyo ikozvino.
Isu tinogadziridza iyi runyorwa pese panobuda mutambo mutsva wakakodzera kuwedzerwa pane urwu runyorwa, saka iwe unogara uchiziva nezvemitambo yazvino uye mikuru.
Kunyangwe nharembozha isina backlog inokatyamadza uye nhoroondo yeRPG dzinoitwa nePC uye zvinyaradzo, zviripo zvichiri zvakati wandei zvakanaka kuti iwe unogona kutamba chaipo pafoni yako. Mamwe maclassics akaiswa kumusoro kweyekubata kumeso asi vamwe vakasiyana pachikuva ichi. Idzi inguva dzekunyura, usaite kukanganisa, uye wakakodzera mutengo kupinda.
Hondo Chasers: Hondo Husiku
HondoChasers: NightWar iri kuhwina mubairo JRPG iyo inopa imwe yeakazara mafoni RPG zviitiko iwe zvauchatamba - uye izere nepfungwa yekuti pane kwete mune-app kutenga kana kubhadhara DLC kunetseka nezvayo. Hareruya!
Zvese zvemutambo uyu zvakapukutwa uye zvakakwana, uye zvinotanga nepasi rakasimba iro rakazadzwa nemakomba akavanzwa kuti vaongorore, vakuru vakuru kutora pasi, uye zvimwe zvinoshamisa munzira.
Kurwira-kwakavakirwa kurwa kunofuridzirwa nevese vaunofarira vaunorangarira kubva kuJRPG genre uye iri yechokwadi kurapa kunyangwe kune fanika seni seni. Pamwe nenyika yakaoma uye inokamhina kuti uongorore izvo zvakazara nevavengi kuti varwisane nazvo, kune zvakare zvakadzama zvekugadzira zvinhu pamwe nekuvandudza zvombo zvechikwata chako, nhumbi, uye zvishongo zvemashiripiti. RPG yakangonaka chete senge nyaya yayo uye mavara uye yakapihwa kuti mutambo uyu wakavakirwa pane yakajeka graphic yezita rimwe chete isu tinopihwa akazara akakwana mavara uye inomanikidza nyaya.
Iyo rondedzero inotarisa pane nyaya yemusikana mudiki, Gully, sezvaanotora chikumbiro chekutsvaga baba vake vakarasika kwenguva refu, Aramus. Akanga ari gamba kumusha weko uyo asina kuzombodzoka mushure mekuenda kuGrey Line, iri padyo-risingapindike rusvingo rwehutsi hunoganhura nyika yavo iyo isina kana chinhu chakadzoka kubva pakambopinda. Aramus aive asiya kumashure seti yemashiripiti gauntlets runyerekupe rwekupa masimba asingataurike kune iye akapfeka. Gully anofanira kudzidza kushandisa mabhaisikopu ababa vake paanotanga nhorondo yake achidarika Grey Line kuti afumure chokwadi chiri kumashure kwekutumwa kwababa vake kwekupedzisira.
Gully akabatanidzwa nechitsigiri chinotsigira icho chinosanganisira Knowlan uyo akangwara wekare mage anogara achifamba neCalibretto, yekare hondo golem yakavakirwa kurwa iyo yakavandudza yake yega manzwiro uye manzwiro asi iye achiri kukoka dhongi kurwira shamwari dzake.
Kune Garrison, paladin anga ari shamwari naAramus uye anonzwa achimanikidzwa kuchengetedza Gully parwendo rwake uye pekupedzisira Red Monika, tsotsi rematsotsi iro rinokwanisa kuita mutsetse pakati pezvakanaka nezvakaipa. Uyu mutambo unofanirwa kuongorora kuti uri fan of chero HondoChasers kana kungotsvaga JRPG nyowani yekupinda mukati.
$ 10 kuGoogle Play Store
Vakarwisa Hondo: Nightwar mutambo wakanyatsogadzirirwa kukwikwidza kune vateveri vezita-rekutamba-rinotamba zita, iine JRPG pesvedzero mune ese mativi emutambo. Zvakanakisa pane zvese, hapana microtransaction yemhando ipi neipi - tenga mutambo uye mese makagadzika.
Rufu Rwokufa kuCanada
Rufu rwaKuenda kuCanada mutambo we $ 10 - ndinoda kuvhura neizvozvo kuti ndiite kuti tsikamutanda ribude munzira ndisati ndataura nezve kutyisa kwakaita mutambo uyu.
Wakatarisana ne zombie apocalypse, iwe unofanirwa kutungamira yakakwenenzvera timu yevamwe vanonakidza mavara pane inouraya mishoni kune yakasarudzika chengetedzo yeCanada. Pakati penzira, iwe unozofanirwa kuongorora uye kupamba nzvimbo dzekushandisa, uku uchizogadzirisa hutano hwechikwata chako uye hunhu.
Zvese zviri muRufu Road kuenda kuCanada zvinongoerekana zvagadzirwa, zvichiita kutamba kwega-kuburikidza neakasarudzika ruzivo mune ino simba yemugwagwa rwendo chiito-RPG. Unogona kungoerekana wagadzira hunhu hwako uye shamwari kana tsika yekugadzira yako kutanga mavara ane akasiyana hunhu kuti uvabatsire kuramba vari vapenyu, asi iwe zvichida haudi kuve wakanamatira zvakanyanya kunze kwekunge iwe uri wakanaka kupfura.
Iwo anotonga anobvumidzwa kutora kumwe kujaira, uye kune yakanaka yekukwira yekufunda curve apo iwe paunodzidza kuti ndezvipi zvombo zvinonyanya kushanda uye inguvai zvirinani kurwa kana kumhanya. Uye newe chido kufa, kutanga uye kazhinji, kunyangwe icho chiri chikamu chemufaro weapocalypse ye zombie, handiti?
Pane huwandu hunosekesa hwekudzika mumutambo uyu, kusanganisira gumi dzakasiyana mutambo mutambo kuti uzarure. Mutengo wacho ungaratidzika kunge wakadzika zvishoma, asi kana iwe uri fan of akasimba-senge zombie mitambo, zvakakodzera kukosha!
Zvese zviri muRufu Road kuenda kuCanada zvinongoerekana zvagadzirwa, vachiita yega yekutamba-kuburikidza neakasarudzika ruzivo mune ino nzira rwendo chiito-RPG.
Ehe, ndinoziva ndiri kubiridzira pano, asi ese maviri mazita eEvoland mitambo yakanakisa zvekuti ndaifanira kuisanganisira mune imwechete yekupinda. Zvimwe kunze kweRPGs dzekare, iyo Evolands account yeimwe yenguva yakawanda yandakaisa mumitambo yemafoni. Ivo mumwe nemumwe vanokutora iwe kuburikidza nenhoroondo yekutamba, kuwedzera uye kushanduka paunenge uchienda kuburikidza navo. Iyo yakasarudzika nzira yekuratidza chiito chiitiko, zvechokwadi.
Kune zvakawanda zvinosetsa, mazai eisita, uye mareferenzi akajairwa kumitambo mikuru yekare iyo yakabatsira kutsanangura iyi nhepfenyuro yepakati. Iwe uchaenda kubva ku2D monochrome kuenda ku 3D chaiyo-nguva kurwa paunenge uchifambira mberi, kuvhura matekinoroji emitambo matsva anochinja matambiro aunoita. Iwe unozomanikidzwa kuwana chimwe chakasarudzika seichi.
Kune $ 0.99 uye $ 3.99, zvichiteerana, Evoland neEvoland 2 vanofanirwa kunge vari chikamu cheraibhurari yako kana iwe: 1. uchida chimwe chinhu kudururira toni yenguva mukati, uye 2. kuda vhidhiyo mitambo senge art fomu uye unoda kutamba chimwe chinhu inokoshesa midzi yayo.
$ 1 kuGoogle Play Store
Kufamba kuburikidza nhoroondo yekutamba muEvoland, chiitiko-chinodakadza RPG icho chiri kuputika. Vhura matekinoroji matsva anoshandura maitiro aunoita
$ 4 kuGoogle Play Store
Tora zvawakadzidza naEvoland uye uve nezvimwe! Evoland 2 inotevera iyo pfungwa yakafanana neyayo yakatangira: famba kuburikidza nenhoroondo yekutamba paunotanga nyaya ine hupfumi.
Ndakanga ndine dambudziko rekutora imwechete RPG yeiyo rondedzero, sezvo isu tine akati wandei kusarudza kubva. Pakupedzisira, ndakaenda neKnights yeOld Republic, inozivikanwa zviri nani seKOTOR, pane iyi rondedzero. Kune imwe, Star Wars ndeye yakakurumbira franchise uye ndinofunga uyu mutambo unofanirwa kutamba kana iwe uchinakidzwa nenyika iyoyo. Pakutanga yakasikwa neBioWare mukati mayo heyday, KOTOR inyaya inoshamisa.
Kupfuura izvo, ndinotya kuti ndinopinda mune vapambi, saka ndichaisiya ipapo. KOTOR inoonekwa seimwe yeakanakisa maRPG enguva dzese uye ndinogona kuve ndakamanikidzwa kusawirirana. Yakatumirwa kuAroid nekuda kwevanhu kuAspyr, KOTOR ine hupenyu hutsva parunhare uye kunyangwe iwo ungave uri mutengo unodhura wekupinda, yakakodzera peni imwe neimwe. Kubva pane nyaya kuenda kuhondo, iyi uye nhevedzano yayo zvirokwazvo ndiyo yakanakisa mitambo yeStar Wars yakamboitwa.
Iko kutsigirwa kwepikicha yemupadhi, kubudirira, uye yakagadziridzwa UI yakagadzirirwa zvakanakira touchscreens. Iyo yakanaka chiteshi uye ini handina kumbosangana nechero bugs mumakore andanga ndichitamba izvi. Kana iwe uchida Star Wars, zviitire iwe nyasha uye utarise KOTOR.
Yakasarudzika RPG inoonekwa seimwe yeakanakisa nguva dzese, KOTOR mutambo wakakura wakafungidzirwa nhare. Zvakakodzera mutengo wekukumbira kuti uwane yenyaya inonakidza uye mutambo wakanaka kwazvo.
Kunge zvinhu zvinopfura? Saka chikamu ichi ndechako chete. Kubva pamunhu wekutanga kunyudzwa kusvika wechitatu-munhu kumusoro-pasi, iyi mitambo izere nezviito uye mabara. Chii chimwe chandinofanira kutaura?
Paive netoni yehope yakatenderedza Call of Duty Mobile mukati meiyo beta uye pamberi pekuvhurwa kwayo kwepasirese, uye kuchikwereti cheActionivision neTiMi Studios (inotsigira yeMitambo yeTencent) mutambo uyu unoshamisa uye wakasarudzwa nenzira kwayo seimwe yeakanakisa nharembozha mitambo yakaburitswa mu2019 - uye inongoramba ichiita zvirinani muna2020.Muchidimbu chekupedzisira, ikozvino iri kupa yakatanhamara nyowani makumi maviri vs. 20 Hondo Royale modhi inonzi Hondo.
Chikonzero chakakura nei mutambo uyu uchitamba mushe kudaro unogona kupihwa mukana weTencent Mitambo. Iyo ine yavo nharembozha yekupfura nePUBG Nhare, mumwe mutambo wakaratidzirwa pane ino runyorwa, uye vateveri vemutambo iwoyo vanozoziva inozivikanwa mushandisi interface uye inoshamisa Gameplay mashandiro ayo akave akagadziridzwa zvakakwana kune nhare. CoD Nhare inoshandisa akawanda emifananidzo mamepu evakawanda kubva kuKuda kweDuty franchise uye inonyatsoita basa rakakura kududzira chiito chinomhanya-mhanya chinoita kuti mutambo unakidze kutamba pane mamwe mapuratifomu.
Kufona kweDuty Mobile kunoisa musimboti wechikwata chinouraya macheke iyo Call of Duty inozivikanwa pamwe neyeRoad Royale mode iyo yakaunzwa mune yakakura franchise neCoD: Black Ops 4. Ivo vaigona kuve vakangoramba vakanamatira ne timu yekuuraya uye vachiri mutambo wakakura uri pamaoko avo, asi kusanganisira kwegumi-mutambi kurwa kurira (pamwe neiyo fan-inofarira zombie maitiro) inongowedzera kukosha kwakawanda kuhuwandu hwakazara.
Ndanga ndichitamba CoD Mobile kubvira beta uye yanga iri imwe yemitambo yangu yekuenda chero ini ndawana maminetsi mashoma ekuuraya. Nekuti mutambo uyu wakakurumbira zvakanyanya, inokurumidza kusvetukira mumutambo, kunyangwe iwe uchida kutamba nemitambo, kana kuenda kunokwikwidza nevatambi vemauto mune yakatarwa mutambo.
Nekuti iri yemahara-yekutamba mutambo, pane zvakajairika kuteyiwa kunosanganisira mu-app kutenga kwekutenga mu-mutambo mari, iyo inogona kuzoshandiswa mumakateyeti ehondo akazadzwa nezvisaririra mibairo, uye tiered kufambira mberi nzira ine premium kunyoreswa kunowanikwa ku net mimwe mibairo. Tichifunga nezve console kana PC vhezheni yeCall of Duty inokumisikidza kumashure ingangoita $ 60 kumberi, pamwe neese ekupedzisira akabhadharwa DLC uye ma microtransaction asingadzivisike ekuvandudza ekushambadza, iyo mobile vhezheni inopedzisira yanzwa kunge iri pamusoro maererano neiyo yepamusoro-kukosha. Iwe haufanire kupaza kiredhiti kadhi rako kuti unakidzwe nemutambo uyu - chinova chikonzero chikuru nei Call of Duty Mobile ichida nzvimbo yepamusoro pane yedu runyorwa.
Mahara w / IAPs kuGoogle Play Store
Call of Duty yakahwina Game yeGore mibairo ye2019 nechikonzero chakanaka. Iyo inoshamisira yakakwana vhezheni ye Call of Duty yemafoni ayo akasununguka kutamba.
JYDGE ndeye gritty uye nechisimba kumusoro-pasi mapatya-tsvimbo shooter iwo mhedzisiro kuputika kutamba. Iwe uri iyo JYDGE, cybernetic yekumanikidza mukuru anoshandisa Gavel yake (ona: BIG freaking pfuti) kuita dobe kunze RoboCop-maitiro ekururamisira.
Chikamu chega chega chine matambudziko akasiyana anodikanwa kuti afambire mberi asi haatombonzwa kunge basa rekunyora. Kutora mari isiri pamutemo munzira, iwe unokwanisa kukwidziridza JYDGE uye gavel yake nesarudzo yakadzika yezvishongedzo. Nenzira iyoyo, JYDGE inochengeta iyo yakashata-senge chinhu kubva kune yakatangira Neon Chrome nekukukurudzira iwe kudzosera mazinga nemaitiro akasiyana ekusimudzira kusvika wapedza zvese zvinonetsa.
Nemutambo uyo iwe waunodzokorora nhanho kakawanda uye zvakanyanya, zvakakosha kuti mutambo uwane iwo musanganiswa wemutambo mukuru nenziyo inonakidza isinga nyanye kutsamwisa kana kudzokorora - uye JYDGE inonunura zvachose.
Tarisa uone kuongorora kwangu kwakazara kana iwe uchida kuwedzera kutendiswa.
$ 6 kuGoogle Play Store
JYDGE yakatwasuka-kumusoro imwe yemitambo yakaipa kwazvo yekupfura iwe yaunowana muGoogle Play Chitoro. Iyi mapatya-tsvimbo kumusoro-pasi shooter iyo inoratidzira toni yenzira dzekuvandudza zvombo zvako paunenge uchipa kururamisira neGavel yako.
Hazvishamise kuti PUBG Mobile inotamba sei paApple. Izvo zvakatanga senge hombe 100-mutambi kurwa royale mutambo wakaramba uchikura nekushanduka kuita iyo-yenguva-nguva yakanakisa yekuita shooter mutambo we mobile. Donhedza mumamepu akakura akatakurwa nezvombo, ammo, tactical giya, uye mota mune yakasarudzika hondo royale modes Iwe unodonhedza mukati semunhu anoridza wega kana sechikamu chechikwata uye unofanirwa kushandisa hunyanzvi hwako hwese kudzikisira vadzivisi vako kusvika wave murume wekupedzisira amire.
Izvo hazvinzwike nezve yakakurumbira PC kana koni kuburitswa kuti uwane nzira yayo kuenda kuApple, asi iwe unozoshamiswa nemabatiro anoita PUBG pane smartphone. Ndiwo mutambo wakanakisa unowanikwa kune Android kunyangwe paine zvimwe zvinoshungurudza munzira iyo iyo inotonhorera zvakapambwa yakavanzwa mumabhenefiti anobvarura mabhokisi ayo asingafanirwe kunge asipo. Kunyange zvakadaro, mutambo wacho wakasununguka-kutamba uye unowanikwa kune vakawanda mitambo.
Ini ndinoda kutamba nemifananidzo yakakwenenzverwa, asi mutambo zvakare unoita kuti udzikise zvakadzama graphical kuti iwe ugone kunakidzwa neyakajeka Gameplay kunyange uchitamba pane chinyakare chishandiso. Kana iwe uine chishandiso chitsva, dhonza iwo marongero kune iwo max uye unakirwe neimwe yeakanakisa anotaridzika mitambo yemafoni yandatamba munguva refu. Une foni yekare ine mashoma mafaera, asi uchiri kuda kupinda mumutambo? Buda PUBG Mobile Lite iyo yakanyatsogadzirirwa kutora nzvimbo shoma pafoni yako uye unomhanya zvakanaka pamafoni ane mashoma RAM.
PUBG Nhare neimwe nzira inonunura ese epic nguva iwe yaungatarisira kuti PC mutambo wakadzikiswa pasi zvakakwana kune nhare mbozha, uye ivo vagamuchira zvechokwadi kubudirira kubudikidza nekuenderera nekuwedzera mitsva yeEvoGound mitambo modhi inosanganisira yakatsaurwa zombie Hondo Royale modhi, akawanda timu kufa death match. , inoputika itsva yemotokari kurwisa RageGear modes, uye Payload modhi, iyo yakaunza maherikoputa, miniguns, uye roketi launcher. Unganidza boka rako pamwe chete uye ini ndichakuona panzvimbo yehondo!
PUBG Mobile ndeye yemahara-yekutamba kurwa royale shooter iyo inokwikwidza iwe kusvika kune vamwe 99 vatambi. Iine rondedzero inogara ichingokura yemamepu uye nemamodhi modhi kusarudza kubva, ndiwo mumwe wemitambo yakanakisa inowanikwa yekutamba pane Android.
Tesla vs Lovesters
Tesla vs Lovecraft ndiwo mutambo uchangoburwa kubva kuFinland vanogadzira 10tons Ltd uye ndiwo mushonga chaiwo. Mutambo uyu uri mumakomba Nikola Tesla uye hu-tech zvigadzirwa zvake zvinotsividza HP Lovecraft uyo akaburitsa mafungu asingaperi ezvikara zvinotyisa zvinokurumidza kukukomberedza kunze kwekunge warwira.
Uyu mutambo wakasarudzika wakasarudzika uyo mapatya-tsvimbo anodzora ekufamba uye kupfura. Mushandirapamwe unowedzera zvishoma nezvishoma mukutambudzika pamwe neanopfuura mazana maviri evavengi vari kuburitsa pachiratidziri panguva imwechete kana usiri kukurumidza nemunwe wako wekutanga. Neraki, kune masimba-kumusoro uye maringe nezvakawanda zvinowanikwa mune yakashata-senge fashoni. Iwe unotora XP apo iwe uchiuraya zvikara uye unowana nyowani nyowani nguva dzese iwe paunokwira kumusoro. Power-ups uye zvombo zvinongoerekana zvasangana pamepu uye iwe zvakare uchazoda kuunganidza zvimedu zvitanhatu zvinodiwa kuvaka Tesla mech iyo inogona kutema chero mhomho munguva pfupi.
Iwo ekubata-skrini ekudzora anonzwa kugadzikana uye mutambo zvakare unopa rutsigiro rwakakura rwevatongi veBluetooth iyo inogara iri inonakidza kuona mumutambo wekutanga. Pane toni yezvinyorwa zvakavakirwa mumutambo wepasi, pamwe chete nedzimwe DLC dziripo dzinopa zvikara zvitsva, zvombo uye zvimwe zvakawanda. Usanetseke, mutambo unonzwa wakakwenenzverwa usingade kuburitsa mari yakawanda, asi kana uchinge wapedzisira wazviita kuburikidza nezvose izvo Tesla vs Lovecraft zvinokupa iwe unogona kufara pane zvishoma zvishoma zvekuongorora.
Tesla vs Lovecraft ndiwo mutambo uchangoburwa kubva kuFinland vanogadzira 10tons Ltd uye ndiwo mushonga chaiwo. Mutambo uyu uri mumakomba Nikola Tesla uye yake hi-tech zvigadzirwa zvekurwisa ane kutsiva HP Lovecraft uyo akaburitsa mafungu asingaperi eanotyisa madhiri.
Zvakanakisa Magemhu eMitambo
Yakakwana nguva yaunoda kuuraya imwe nguva, mitambo yemapikicha iri dime gumi nevaviri pa Play Store uye zvimwe zvacho zvakatonaka. Zvimwe zvinoita kuti iwe ufunge kana kushandira kuti pfungwa dzako dzitenderedze kwavo kwepfungwa pfungwa. Zviratidzo zvepikicha zvinokuchengetedza iwe kufarira uye kuvaraidzwa nekumanikidza iwe kuti utarise, kunyangwe chiri chimwe chinhu chakareruka sekucherechedza kuti ndeupi muto uri kuuya unotevera. Hazvina kuoma kuona kuti sei ivo vachinyanyo kufarirwa nevazhinji mobile gamers.
Rakatsikiswa nevanhu vakanaka paNoodlecake Games, Chameleon Run inomhanya inomhanya inoidza yako nguva yekuita munzira inogona kukuvadza uropi hwako zvishoma.
Iro zita remutambo inomhanyisa paunenge uchisvetuka uye kumhanyisa pamapuratifomu ane mavara. Une hunyanzvi hwekukwakuka hunyanzvi uye kugona kushandura ruvara, uye unofanirwa kuzviita kuburikidza neimwe kosi asi iwe unongobvumidzwa kubata zvinhu zvinoenderana neruvara rwako. Zvinoita sezviri nyore zvakakwana? Eya, funga zvakare!
Yakanaka sekunge mutambo unotaridzika kana uchimhanya pazere furemu chiyero mufaro wechokwadi unouya kubva kune chaiyo yekuisa pane maviri-bata bata. Kana iwe uine nguva switch yemuvara chete paunobata papuratifomu unokurumidza kukwidziridza. Wekusvetuka zvigadziridzo zvakaringana chaizvo uye zvinobvumidza iwe kuti zvipikiri kunyengedza zvakapetana kaviri kusvetuka nyore. Danho rega rega rakagadzirirwa kuve risiri-mutsara, zvichireva kuti pane nzira dzakawanda dzekuitisa kusvika kumagumo, zvisinei, panewo matatu matanho akakosha ekuzadzisa zara rega rega ayo achakuchengeta uchidzoka kuzhinji.
Pakazara, mutambo wacho mupfupi, asi wakagadzirirwa kuti uve mumwe weayo mitambo yakanakira kumhanya - kunyangwe paine mamwe makwikwi emakwikwi Kunze Uko. Ini ndinonzwa sekunge mutambo wacho urikushaya one knock out ficha - kosi mhariri iyo inobvumira vatambi kurodha yavo yega mazinga. Kana kungo wedzera mamwe mazinga pamwe nemapuratifomu emamwe akatosiyana mavara ekuchinja pakati. Zvakadaro, kune $ 2 ndiyo gehena rimwe remutambo unonakidza.
$ 2 kuGoogle Play Store
Chameleon Mhanya ine mavara asingagumi mumhanyi anokushora iwe nekusvetuka chaiko uye nekukurumidza kufunga kuti uve nechokwadi chekuti haubate chikuva chisiri icho uye wozvirova wega.
Zvakaoma kuwana mutambo unonakidza wepuzzle uyo hauedze kukutengesera pasimba-kumusoro kana hwakawedzera hupenyu kana chimwe chinhu.
Ndicho chimwe chete chezvikonzero nei Holedown iri mutambo wekumira muna 2018. Holedown ichaita kuti iwe ugadzire zvine hungwaru kuburikidza nepakati pemitumbi yekumatenga - kutanga nemaasteroid uye kushanda nzira yako kusvika kuSuva - uchishandisa fomula yemitambo yekutamba yekubhowa mabhora mabhuroko. Chidhinha chega chega chine nhamba inomiririra huwandu hwekurova hunodiwa kuti uiparadze, kana iwe unogona kuparadza chinotsigira chinobvisa zvese zviri pamusoro payo.
Uyu mutambo wekutora-uye-kutamba iri zano riri nyore kubata asi iwe unokasira kudzidza kuti pane huwandu hwehurongwa uye hunyanzvi hunobatanidzwa. Izvo zvese zvidhinha zvakakombama, zvichikubvumidza iwe kumisikidza inonyengera bhangi kupfura kujekesa zvikamu zvakakura zvemabhuroko mune kamwechete kuenda. Izvi zvinozove zvakakosha zvakanyanya sezvo iyo skrini inokwira kumusoro mutsara mumwe mushure mekupfura kwese. Kana mabhuroko akasvika pamusoro pechiso, mutambo wapera.
Pakati penzira, iwe unotora makriststi aunoshandisa mukusimudzira ayo anokupa iwe mamwe mabhora pfuti, uye mamwe mapfuti kutenderera. Uku kukwidziridzwa kwakakosha pakuzadzisa mapuraneti epashure asi zvakare rega nhanho dzekutanga dzive dzakawanda dzekukanganisa kusingafungi kwenzira yako yepasi pevhu. Zvese zvataurwa, hazvizokutorere iwe kureba kuti ubudise ma stats ako ese muHoledown, asi izvo zvinonyanya nekuti zvakaoma kuti umire kutamba mutambo uyu kana watanga.
Kana iwe uri fan of physics-based puzzle mitambo uye uri kutsvaga kutsva kutsva, Holedown yakakodzera mari yako!
Holedown ndeye ungwaru utore pane bhora uye zvidhinha rudzi uko iwe unovhura mabhora ekuchera pasi kusvika pakati peasteroid, mapuraneti uye nyeredzi. Iyo inopa nyore gameplay apo ichiendesa iyo isingagumi yekunetseka maitiro.
Hongu, ndiri kubiridzira zvakare, asi chete nekuti ini ndinonamata ese ari maviri emitambo iyi zvakanyanya. Ndingave ndakamanikidzwa kuti nditaure kuti ndeipi yandinofarira: iyo yekutanga kana iyo yakawedzera pane epfungwa pfungwa? Sezvo ini ndisingakwanise kusarudza, unowana vese vari vaviri pano.
Mikana ndeye, iwe wakambonzwa nezveMonument Valley zvisati zvaitika. Inozivikanwa nechikonzero neayo isingagumi Gameplay, yakanaka dhizaini dhizaini (iyo inowanzo kuteedzerwa), uye minimalist nyaya. Gadziridza zvakare inoshamisa yekuvakisa, unakirwe neiyo surrealism uye ambiance, uye nyudza iwe mukutungamira iye akanyarara mambokadzi kune kwake chinangwa. Mukutevera, ita zvimwe zvakafanana, asi padanho rakakura.
Ini handisi kuona izvo zvakawanda zvekutaura. Kana iwe uri fan of puzzles uye usati waedza Monument Valley, saka ini ndinokurudzira zvikuru kuti iwe udaro.
Inofungidzirwa ikozvino kuve imwe yemakanakisa emitambo yemitambo yakakomberedza, Monument Valley inomanikidza iwe kufunga kunze kwebhokisi kuti usvike chinangwa chako.
$ 5 kuGoogle Play Store
Kukura pane pfungwa dzakapihwa neiyo yaakatangira, Monument Valley 2 inodzoka neiyo imwecheteyo gameplay iyo vakawanda vaida neyekutanga. Tungamira amai nemwanasikana wavo kuburikidza nemupata paunotora mapuzzle matsva.
Iyo Kamuri: Zvitadzo Zvekare ndiyo yazvino epic puzzle mutambo kubva kuFireproof Mitambo uye yechina mune mubairo-unokunda 'Iyo Kamuri' puzzle mutambo wakateedzana. Iwe urikutsvaga imba yeinjiniya ane chinzvimbo uyo akashaya paunowana chinoshamisira imba yekudyira.
Uchishandisa chakashongedzerwa cheziso iwe unokwanisa kuongorora makamuri akasiyana mudhorobha ayo akazadzwa neakasarudzika akaomesesa emabhokisi emapuzzle uye contraptions. Pane chimwe chinhu chakashamisa chiri kuitika pano, saka pamwe kana uchikwanisa kugadzirisa zvese zvivharo uchaona zvakaitika kuna mainjiniya asipo nemukadzi wake.
Kana usati wambotamba mutambo kubva ku "Iyo Kamuri" akateedzana kare, ingo gadzirira mumwe wemitambo inoshusha yauchazombotamba parunhare. Mifananidzo uye odhiyo zvinouya pamwechete kugadzira zvinoshamisa zvinokatyamadza sezvaunonyatsoongorora zvinhu zvakaoma uye nekuvhura zvakavanzika zvekukubatsira parwendo rwako.
Kana iwe uchida kubata pamwe nemimwe mitambo, iwe unogona kumisikidza Imba, The Room Two, uye The Room 3 pamitengo yakaderedzwa.
Iyo Mutsetse weKamuri inopa zvimwe zvezvakanakisa zvekutamba zviitiko pane nhare. Gadzirisa mapazuru akaomesesa uye uvhure zvakavanzika zvakavanzika mukati meizvi zvisinganzwisisike contraptions.
Ini ndinoda kuwana iyo quirky indie mazita ayo anogara achigona kuwira mumutsika weGoogle Play Store, asingagashiri kukwidziridzwa uye kutarisirwa kwavanokodzera. Victoria inowira muchikamu ichocho, ichiendesa chiitiko chinonakidza icho chinobatanidza dhizaini yemimhanzi uye mimhanzi pamwechete kugadzira popu yepuratifomu yaunoridza zvakanyanya nenzeve dzako sezvaunoita nezvioko zvako.
Vectronom, pane dzimwe nguva, chiitiko che psychedelic chakapihwa iwo anopenya mavara uye kubhidha yemagetsi rwiyo rwakagadzirirwa kukupinda iwe paunenge uchitamba. Nhanho yega yega inoshanduka kune kurova kwemumhanzi, uye mutambo unoreketa iwe pamabatiro aunoita macube ako anoteera mutinhimira. Mutambo wakamboburitswa paStam uye weNintendo Shandura, uye nepo mutambo wacho pasina mubvunzo uchidzora nenzira zvirinani nekhibhodi kana mutungamiriri D-pad ini handina kana nhaurwa neyekubata skrini yekudhiraivimba iyo inotsamira pane swipes uye matepi.
Zvakananga kumberi sezvo pfungwa iri pano, iwe unozopikiswa nekuoma kwematanho iwe paunofambira mberi kuburikidza nemutambo. Ikozvino pane 31 mazinga anowanikwa kutamba kuburikidza, imwe neimwe iine yavo yemusoro wenyaya kuunza mitezo mitsva yekunzvenga uye nhanho mamakanika kugona. Ivo vanogadzira indie kuseri kwemutambo vanotarisira kuenderera nekugadzira zvirimo zvemutambo nekutora mimhanzi yakatumirwa nevashandisi uye nekugadzira matanho matsva akatenderedza iwo matragi. Nepo mutambo uchikukurudzira kuti uongororezve mazinga uye woedza uye kuvarova vakachena mune imwe kuyedza kana zvirinani kuyananisa mafambiro ako kune kurova kwemumhanzi, ndingafarire kwazvo kuona nharaunda ichivaka yakatenderedza Vectronom iyo inounza mamwe mapuzzle akakwana mobile play.
$ 5.49 kuGoogle Play Store
Vectronom ndeye psychedelic puzzle papuratifomu uko iwe kwaunoda kunamatira neirove kana iwe uchida kubudirira uye kugadzirisa yega yega yakajeka nhanho.
Chikamu chakajairika, zvakanyanya kupfuura ma RPG, mapuratifomu anowanzo kuve 2D, asi "mupuratifomu" anongokuudza matambiro anoita mutambo. Iko kune chiito RPG mapuratifomu, metroidvanias, zvichingodaro. Iyo yakasarudzika dhizaini yemutambo nekuda kwechikonzero uye inoshandura zvakanyatsonaka kune nhare.
Kuuya kunze kwebindu rekuruboshwe, Konami's classic Castlevania: Symphony of the Night yakavhurwa parunhare kutanga kwaKurume kusvika kumufaro uye kushamisika kwevakawanda. Ndakaitenga ipapo uye iwe unogona kuverenga pfungwa dzangu pairi pano. Ndiyo imwe yeakanakisa $ 3 yandakamboshandisa muGoogle Store. Kunyangwe paine kusaririra kwakakura kwemimwe mitambo kuti usvike, ndakapedza yakanaka nguva yekumutsidzira hudiki hwangu.
Kunze kwekungori kukakavara uye kusuwa, Symphony yehusiku inotamba zvakanakisa pane Android. Iwo ekubata kumeso maseru akajeka uye anoshanda, asi ini ndakaona mutambo wacho uchinyanya kutamba nemutongi. Chikwata chiri kuseri kwechiteshi chakaita basa rakakura nekushandura mutambo wekare kwazvo kuchikuva chitsva uye, ini ndanga ndiine mabraketi navo, zvigadziriso zvinobata bata rega chero munhu adhonze mukati .Zvisina kudaro, chero gamepad inoshanda neApple inofanira kuita zvakanaka pano (Ndakashandisa Xbox One controller). Ivo vauri vane yakakwirira zororo zororo zvinoratidzira vanogona kuchemedza kumwe kusanzwisisika nemutambo uye vavaki vacho vanopa zano kuti vashandise 60Hz - asi ivo vanongotaura zvakananga nezvePixel 4 neSmooth Display.
Symphony yehusiku chinhu chakasarudzika, yabatsira kutsanangura rudzi rutsva rwemutambo watichiri kuona kusvika nhasi. Unotevera Alucard, mwanakomana waDracula, paari kutsvaga iye Richter wacho asipo. Wiza chivanze chisinganzwisisike uye chine ngozi paunowana kugona kutsva, kuvhura mapfupi, uye kuve nesimba. Iwe unogona zvakare kutamba saRichter iye (kumusoro kusvikira wasangana nemumwe munhu) uye Maria nekupinda mazita avo paunenge uchitanga chengetedzo nyowani. Wedzera iyo kune iyo yekuvandudza system uye iwe une boka rezvinhu zvekushandisa mukati. Nekuda, iyi $ 3 yakanyatsoshandiswa.
Zvese zvatinoda iye zvino Super Metroid pane Android. Huya uuye, Nintendo.
$ 3 kuGoogle Play Store
Kune akawanda hubbub akakomberedza nhare kuburitswa kweSymphony of the Night nechikonzero chakanaka. Vanhu vazhinji vanogona ikozvino kuona uyu mutambo unoshamisa mukubwinya kwayo kwakadzokororwa.
Kudzoka kumakumi gumi apfuura, isu tine mutambo wakatora mamwe epfungwa pfungwa kubva kuSyphony of the Night ndokuisa yayo spin pairi. Sangana naDandara, yakanaka uye inoshamisa inosanganisa metroidvania. Sezvaunogona kutarisira kubva pamhando iyi, kune zvakawanda zvekutsvaga wega paunenge uchishanda kuita kuti heroine yedu ive nesimba pamiedzo iri mberi.
Dandara anotaurira nyaya yemukadzi anorwira kunzvenga kupunzika kuri kuuya kwenyika. Famba mairi, sangana nevanhu vanonakidza, uye upone uchipokana nematambudziko akamirira iwe. Defy giravhiti paunenge uchitsvaga rakasarudzika pasirese uye nekuwana zvaro zvakavanzika. Ndiwo mutambo unonakidza.
Zvirinani zvakadaro, yakangowana yemahara yekuwedzera inonzi iyo Miedzo yeKutya iyo inowedzera nyowani mukuru webasa, nzvimbo, uye masimba-kumusoro. Iwo mutambo wakawanda we $ 6 uye unokosha kana iwe uchida metroidvanias.
Iyo inoshamisa metroidvania, Dandara yakakodzera nguva uye mari kana iwe uchitsvaga mutambo wakanaka wekutamba pafoni yako.
Kutsika kubva metroidvanias, isu tine Grimvalor, chiito RPG chikuva. Iyi ndiyo yangu yekuenda-kumutambo izvozvi nekuda kwayo muropa Gameplay uye inonakidza mamiriro. Kurwa kwakatetepa, kufamba kwakanakisa, uye zvinongoshanda chaizvo. Kunyanya, ini ndinotamba mutambo uyu nguva dzese pandinenge ndiri kunze uye nezve.
Iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi nezve maitiro aunosvika kune vavengi uye kuyera hunhu hwako. Pane zvakawanda zvekutsvaga, zvakare, nezvakavanzika zvakavanzwa mukati me mepu. Ini ndinonakidzwa chaizvo nehondo uye inonzwa yakanaka uye inogutsa, kunyanya kana iwe uchinzvenga chaizvo uye hunhu hwako hunotyisa flip.
Iwe unowana chiitiko chekutanga chepachena, mushure meizvozvo iwe unofanirwa kukwira fasi inopfuura $ 7 yemutambo uzere. Ini ndinoda zano iri; zvinokuita kuti iwe uone mutambo sezvazviri uye ipapo une sarudzo yekubhadhara kuti uenderere mberi. Enderera mberi uzviedze kuti uone kana iwe uchida.
Mahara, $ 7 yekuvhura kuGoogle Play Store
Grimvalor inozadza iyo chiito RPG itch ichiri inonakidza platformer. Nakidzwa kurwa kwakanaka kwazvo uye kuongorora. Iwe unotowana demo rekuyedza usati watenga.
Pamitambo yese yandakatamba mu2019, Oddmar anomira semumwe wangu wepamoyo wese pachidimbu nekuti wakanakisa chose kubva mukuteedzana kwayo kwekuvhura kuburikidza nematanho ayo ane hupenyu anoratidza kudzama kweudzame iwe wausingaone mumutambo wefoni. Ini zvakare ndakarerekera nekuti ini ndinonamata zvakakwana-zvakagadzirwa zvakanaka indie mapuratifomu asi Oddmar achiri kumira nekuda kwekuve mukuru protagonist uye yakanakisa nyaya yekutaura.
Unotamba saOddmar, Viking yakatapwa uyo asina kumbogara zvachose akararama kuna tateguru vake akarwa uyo anopiwa masimba akasarudzika nean'anga yemashiripiti. Nguva yakatarwa yakanyatso, sezvo Oddmar aine mukana wekuzvidzikunura nekuenda parwendo rwekuregererwa.
Pakazara, dhizaini yemhando inoyevedza mutsara asi haambonzwa kunzwa kwakashata nekuda kwemhando dzakanaka dzevavengi kuti vadzingwe uye zvipinganidzo zvakasarudzika uye mamwe mapikicha anokurumidza kugadzirisa kufambira mberi. Pamusoro peizvozvo zvese, Oddmar inouyawo ichisangana neiyi miedzo-yakafanana neyaValhalla matambudziko akasanganiswa mumazhinji mazinga. Izvi zvinokuchidzira iwe nekukurumidza kupuruzira bhonasi level iyo inowedzera imwe inonyatsoita gameplay akasiyana.
Kubata kwechidzitiro chetsiketi yemitambo yekumisikidza inozivikanwa kuti yakaoma kuwana parunhare, asi zvino mutambo wakaita saOddmar unouya uye unoratidza indasitiri kuti zvaitwa sei. Zvese zvinhu zvinonzwa zvakaringana nerutivi rweruboshwe rwechidzitiro rinodzora kufamba kwako kwakatwasuka uye kurudyi kurudyi kwakazvipira kusvetuka, kurwisa, pasi-kupwanya, uye kupwanya kurwisa
Iwe unokwanisa kutamba chikamu chekutanga chemutambo mahara nemutambo wese wakasvinudzwa neye-imwe-nguva mu-app kubhadhara kwe $ 5 - zvirikukoshesesa kune mumwe wemitambo yakanakisa yauchatamba pafoni yako.
Mahara, $ 5 yekuvhura iyo yakazara mutambo kuGoogle Play Store
Oddmar mutambo wakanaka unoridza sebhuku remifananidzo rinorarama. Unogona kutamba chitsauko chekutanga mahara uyezve, kana uchinge wadanana nacho, vhura mutambo wese ne $ 5.
Kana mapuratifomu e2D asingakuitire iwe, saka ndingakufarire iwe mune imwe ye3D? Suzy Cube chiitiko chinonakidza chinotambanudza mazinga mazhinji, yega yega dambudziko idzva kugona. Iine rutsigiro rwemupikicha, Suzy Cube anovimbisa maawa mazhinji ekumisikidza mafaro. Tsvaga masimba-kumusoro uye tenzi iwo matanho kuitira kuti uwanezve yako goridhe rakabiwa goridhe.
Izvo zvinondiyeuchidza nezve iyo 3D Mario mitambo mumweya, asi ini ndaive nedambudziko rekujairira kubata kwekrini kwekudzora. Kuenda kune mutongi, zvisinei, kwakaita kuti ndinakidzwe nemutambo uyu zvakanyanya zvakanyanya. Kunyange ichi chinhu chechinhu chisinga bata pfungwa yangu kwenguva yakareba, ndaifara. Ichokwadi chiitiko chemoyo wakareruka.
Nakidzwa neyakajeka 3D platforming ushingi muSuzy Cube. Dzosera pfuma yako yekamba yakabiwa sezvo iwe uchikwanisa nhanho yega yega uye unganidza masimba matsva.
Zvakanakisa Isu Mitambo
Zvakafanana nemitambo yemapuzzle, mitambo yetimu zvinoda kutarisisa kwako uye kutsunga kuti ubudirire. Kunyangwe maneja wehumambo kana kurwa kunoratidzika kunge kusingakwanisike mikana, nzira yemitambo inogona kukusundira iwe. Svika nekuchenjerera uye unenge wakangonaka.
Hafu sim, hafu chaiyo-nguva zano, Ukuru ndeimwe yemitambo yangu yenguva-yekuparadza. Iwe uri mukutonga kweumambo hushoma uye zviri kwauri kuti urichengete rakachengeteka, kutsvaga zviwanikwa, maneja hupfumi, uye kubata nehumwe hwese husimbe. Ukuru mutambo wakasarudzika, kuve nechokwadi, asi zvakare unonakidza.
Ehe, iwe haugone kutaura nezveMambo uye kukanganwa nezve Iyo Nothern Kuwedzera. Izvo zvakati wandei, asi zvinowedzera nzvimbo nyowani uye matambudziko matsva ekurwisana nawo, kusanganisira madragoni. Une magamba akawanda, zviwanikwa, uye mamiriro ekunze anoshanduka, futi. Kune imwezve $ 3, iko kuwedzera kwakanaka, kunyanya kana iwe uchida Changamire.
Ivo havasi Starcraft, asi Ukuru uye Kuwedzera Kwekuchamhembe zvese zvakakura pakuuraya nguva pane metro / bhazi, paunenge wakamirira kuhofisi yechiremba, kana chii chauinacho. Nakidzwa nemutambo waro unonakidza uye tarisa maawa achibhururuka.
Tora jasi remutongi weumambo hushoma paunenge uchiedza kuita sarudzo yakanakira vanhu vako. Kurwisa zvikara, kuongorora, uye kuvaka.
Hukuru: Iko Kuwedzera kweNyakatho
Kuwedzera zvimwe Kukudzwa kuhupenyu hwako kwakakodzera iyo madhora matatu, mune yangu maonero, uye Iyo Northern Kuwedzera zvechokwadi kununura. Inowedzera nzvimbo itsva, vavengi vatsva, nematambudziko matsva.
Shongwe yekudzivirira mitambo idhimoni gumi nemaviri muiyo Play Store, asi vashoma vanopa kudzika uye zano riri kuratidzwa neMindustry. Mutambo wejecha-remhando yepamusoro yakatwasuka kutyisidzira paunotanga kutanga sezvo inokupa zvese zvishandiso zvaunoda kuti ubudirire asi zvinoita kuti zvizere kwauri kuti uzvishandise munzira inoshanda uye inoshanda.
Kwete chete iwe unofanirwa kuzvinetsa iwe nezvicherwa zviwanikwa zvekuvaka yako dziviriro, asi iwe zvakare unofanirwa kuchengetedza nekudzivirira yako yekupa mitsara - yekuendesa mabhandi ayo anounza ako akacherwa zviwanikwa kubva kune chibhorani kune yako yepakati base uye yekudzivirira turrets. Zvakanditorera iyo dzidziso yese kuti ndiwane mubato pane anovaka madhiraivhu uye epakati mutambo makanika, uye imwe awa yekutamba mutambo ndisati ndatanga kuvhura matekinoroji matsva pane tech muti. Izvo hazvina kutora nguva refu kusvikira ndatanga kugadzira dzimwe nzira dzehunhu dzakashanda kwechinguva, asi munguva pfupi vavengi veAI vakafunga matekiniki angu, vakakwanisa kupfuura zvidziviriro zvangu, uye ndokuparadza zvachose hwaro hwangu.
Iyo solo modhi inongopusha pasi yezvinhu zvese izvo zvinopihwa nePfungwa. Unogona kuseta mutambo wevatambi vakawanda neyakajairika sevhisi kana pamusoro yemunharaunda nharaunda network, gadzira yako mepu neakaverengerwa mepu mharidzo, kana gadzira mutambo wemitambo nemutambi akapiwa akazara pamusoro pezvese zvakanaka zvemunhu mutambo. Zvakanakisa zvezvose, iwe unowana izvi mumahara-kutamba-mutambo pasina kushambadzira.
Mindustry inoshamisa yakavhurika-yakapera sandbox shongwe yekuzvidzivirira mutambo uyo unokufemera iwe kure padanho rekudzika uye maitiro anowanikwa kune mutambi. Zvichiri nani, ndeye yemahara-yekutamba isina kushambadzira kana kutenga-mukati-app.
Kugara muWashington, DC nzvimbo, ini ndinonyatso zijaja metro system pano - zviri pachena imwe yedzakanakisa nzira dzekupinda nekubuda kunze kweguta mune yangu ruzivo (kunyanya sezvo uchigona kunzvenga nzvimbo yekupaka). Saka pandakawana Mini Metro muGoogle Store, ndakaibata ndokunakidzwa nayo.
Icho chirevo chekutanga ndechekugadzira metro system yeguta riri kukura nekugadzira mitsara nezviteshi. Chinangwa ndechekuenderera mberi nekureba sezvaunogona neako mashoma mashoma zviwanikwa. Zvinonakidza uye yega yekutamba inzira nyowani. Iwe unofanirwa kuronga pamabatiro aunoda kuti system yako ishande. Unogona here kunatsiridza mutsetse wawakatogadzira uye kuti unyatsoita basa?
Iyi ndeimwe yeayo nguva-yekuparadza nzira mitambo iyo inonakidza kwazvo, inonakidza zvakakwana, apo uchikwira metro. Ingori bhuru chete, futi.
Ndiwe mainjiniya uye ibasa rako kugadzira dhizaini yeguta rako riri kukura. Shandisa zviwanikwa zvako zvine hungwaru uye edza kuita kuti zvinhu zvibudirire sezvavanogona kuita.
Anotonga: Mambo Wake
yokutonga yaive imwe yemitambo yakanakisa yegore ra 2016 uye chaiko akakunda iyo chekutanga kumakwikwi eGoogle Play Indie Games. Saka zvisina basa kutaura isu taka pumirwa kuti titarise sequel.
Muna Reigns, iwe unotamba samambo wenyika uye ita zvisarudzo zvine chekuita nezvikamu zvina zveumambo: kereke, vanhu, uto nehupfumi hwehumambo. Chinangwa chako ndechekuti uchengetedze zvese zvina musara - kana chero mamita akazara kune iyo max kana apera kutonga kwako kwapera ... uye kutonga kutsva kunotanga!
Iwo akateedzana anotamba zvakada kufanana kumutambo wekutanga, kunze kwenguva ino yaunotamba saMambokadzi pachinzvimbo chaMambo, uzere uine mavara matsva ekudyidzana nawo uye akawanda matavi enhau anowanikwa. Iyo Gameplay iri nyore sekutsvaira kuruboshwe kana kurudyi pamakadhi uye kana chiri chero chinhu senge mutambo wekutanga pane tani yemazai makuru epasita ekuwana munzira!
Ndingadai kuvenga kukanganisa chero chinhu chemutambo mutsva uyu, asi kana iwe ukatamba wekutanga uye uchitya kuti zvichave zvakafanana, ndinogona kukuvimbisa kuti kune akawanda matsva matsva ekugadzira uyu uchiri mumwe weakanakisa mitambo paGoogle Tamba.
Pinda muchinzvimbo che regal mutungamiri wako uye parlay pamwe nevarairidzi vako uye utumire zvirevo zvehumambo nekungosvetuka kuruboshwe kana kurudyi. Ingova nechokwadi chekuti usarega zvinhu zvichibuda paruoko kana iri musoro wako padanda rekucheka.
XCOM yakawana chinzvimbo chechimiro neayo yakadzama gameplay, kupokana, uye inonakidza maitiro. Iwo iwo mweya iwoyu wakasvika pane Android imwe nguva kudzoka naEnemy Mukati, iyo yekutevera kune Enemy Unknonw, iyo inowedzera pane iconic forumla. Kune mauto matsva, mamepu, vavengi, kugona, nezvimwe zvakawanda kuti iwe uedze.
Zvekare zvakare, iwe uri kudzivirira pasi kubva kuvatorwa uye kukunda hakuna kuvimbiswa. Iwe unofanirwa kuvaka timu chaiyo yemamiriro ezvinhu iwe paunenge uchinanga mukutendeuka-kwakavakirwa kurwa. Kutyisidzira kutsva kuchadenha maitiro ako nehunyanzvi hwako, zvichikumanikidza kuti ushande nesimba kuti ubudirire.
Tora pane yakakurumbira XCOM gameplay nevarwi vatsva, kugona, mepu, uye vavengi. Mafani eiyo Franchise anofanirwa kuwana yakawanda yekuda pano, kunyanya sezvo chiteshi chakaitwa zvakanaka.
Zvakawanda sepuzzle uye mapuratifomu mitambo, sim inotsanangura akasiyana akasiyana mazita. Icho chirevo ndechekuti urikuteedzera chimwe chinhu, ive iwe mwari kana murimi. Kune chikamu chikuru, idzi mhando dzemitambo dziri kutandara uye dzinonakidza sekuparadza nguva kana nguva -singi.
Wakamboda kutamba mwari here? Godus anokupa iwe mukana iwoyo, achikupa iwe simba pamusoro penyika pachayo. Iwe une vanamati vanozorumbidza zita rako rakanaka apo iwe uchivadzidzisa maitiro ekuvandudza kwavo budiriro. Ehezve, iwe unogona zvakare kuve mwari anotyisa uye dzimwe nguva uchafanirwa kuve uri.
Tarisa nyika painoshanduka ichikusvikira uye iwe uchiramba uchichiumba kune chako chishuwo. Shandisa masimba ako ehumwari kugadzira zvivakwa zvevanhu vako, kutumira zvishamiso zvine rudo kana zvinoparadza, uye nekuveza zvinhu kune zvaunofarira. Ndiwo chaizvo mutambo wekupindwa muropa kana iwe uchinge wawana mutambo wacho.
Godus yakasununguka kutamba, asi ine-mu-yekutenga kweGems.
Chaizvoizvo tamba mwari munaGodus, iyo simulator kwaunotungamira hupenyu hwevanhu kuburikidza nehucheche hwayo. Sculpt iyo nyika sezvaunoda, tora vateveri vako kunamatwa, uye uve mwari.
Makuva Anochengeta ndeyemakuva manejimendi sim zvekuti iwe unogona nyore kunyura maawa mukati uchinakidzwa nerima kuseka kwechinhu chakashata chinyaradzo. Iwe unogona kufunga kuti mutambo wawakamboita basa reguva wemakuva unenge uchishungurudza uye kubvarura, asi Graveyard Keeper inopenya uye yakajeka hunyanzvi dhizaini pamwe nenyika yakavhurika uye yakadzika yekugadzira michina inoita kuti zvinhu zvinyatsonakidza. Iwe unopihwawo mubairo wekucheka makona uye nekugadzira. Semuenzaniso, unogona kutanga kutengesa zvitunha zvepasi-pasi kubhucha yemuno, kuitisa mapato anopisa varoyi, kana kuyedza kuisa chepfu kune vamwe vemaguta emunharaunda kutyaira mune rimwe bhizinesi.
Ndiwo musiyano uripo pakati peyekutanga zita renharembozha senge Graveyard Keeper uye mimwe mizhinji yemahara-yekutamba nharembozha sim mitambo - kuunganidza zviwanikwa hakuzi-nguva-yakatemerwa kwemaawa uye unokwanisa kugadzira chero chaunoda mumutambo nekungotsvaga, kupedzisa mibvunzo, uye kuchengetedza makuva ako. Iwe uchanakidzwa nemutambo wakawedzerwa wekutsvaga matongo uye kupedzisa mibvunzo kuti uwane zvigadzirwa zvisingawanzo uye humwe hupfumi.
Sezvauri kuona kubva kune trailer, mutambo uyu uri chaizvo kunaka ine pfupi uye yakatsanangurwa art dhizaini uye yakanaka mifananidzo. Nekuti ichi chikamu chakananga chePC / koni mutambo, iwe unofanirwa kugadzirira kunyura akawanda vazhinji maawa kupinda mumutambo uyu, izvo zvinogona kusanganisira kungoongorora menyu akasiyana uye zvinodzora paunenge uchishandira kuti ungave wakanaka sei Makuva Gadziriso iwe waungave!
Graveyard Keeper is a gravedigger simulator with a dark sense of humor uko iwe unofanirwa kuuya nenzira dzekugadzira dzekukwiridzira bhizinesi nyowani.
Mumwe mutambo wekare wakaunzwa kwatiri paApple, Grand Theft Auto (GTA): San Andreas ndizvo chaizvo zvaunotarisira. Iyo yakavhurika-yepasirese sandbox, kwaunosununguka kuita zvaunoda. Kusiyana nemitambo yeGTA yemberi inoitika mune mamwe maguta, San Andreas inotenderera nyika yese mumaguta matatu. Kukwana kutaura, pane zvakawanda mutambo pano.
Unotamba saCarl Johnson paanodzokera kuLos Santos kunoponesa mhuri yake neshamwari. Paunodzoka, iwe wakagadzirirwa mhondi uye unofanirwa kupukunyuka "kururamisira" uye kudzoka nemigwagwa. Zvese mune zvese, mutambo unonakidza uye Rockstar inoti unogona kutarisira maawa makumi manomwe emutambo. Icho chinopenga.
Maawa makumi manomwe emadhora emadhora emadhora manomwe kunyange iri crazier. Icho chiitiko cheGTA chakanyatso kuzivikanwa neazvino, saka pamwe unoziva zvaunogona kutarisira.
$ 7 kuGoogle Play Store
Grand Theft Auto haidi svumbunuro uye San Andreas ndiyo huru yekupinda. Iwe unogona kutarisira akawanda mashenanigans uye rusununguko, uye matani enguva yemutambo.
Kana usati wambonzwa kana kutamba Stardew Valley zvisati zvaitika, iri simiti yekurima yakavakirwa pamusoro yakasimba 16-bit yakavhurika-inoguma RPG iyo inoita kuti iwe utambe uye uvandudze hunhu hwako uye purazi sezvaunosarudza. Iyo nyaya inotanga nekusvika kwehunhu hwako muPelican Town, kwawakafunga kutora imba yekurara yasekuru vako yakapusa.
Chinoita kuti Stardew Valley mufaro wakadai kutamba isununguko rakapihwa mutambi kuita mutambo wacho uve wako. Kana iwe ukaisa pfungwa pakuvaka purazi rako, mutambo uyu unonyanya nezve zvirimwa uye manejimendi manejimendi, izvo zvinonyatso kukwenya imwe itch yevatambi venhabvu vanopihwa kuti inozivikanwa sei iyo mhando yeRPG iri parunhare - asi neStardew Valley, kune zvakawanda mutambi kuti aongorore.
Pakati pekudyara nekukohwa minda yako, unogona kushanda kukwirisa hunyanzvi hwako neakasiyana maturusi nekuenda kunoredza hove kana kutsvaga chikafu musango, kuenda kudhorobha kunotandara nekuvaka hukama neveguta (uye kunyange kuroora, kana ukasarudza), kana kuenda kune imwe yechinyakare kurwa-kwakavakirwa RPG kushambadzira izere nemibvunzo yekupedzisa uye monster-yakazara mines yekuongorora.
$ 8 kuGoogle Play Store
Imwe yemitambo inonakidzwa yeRPG yemakore gumi apfuura yakagadziridzwa mafoni uye inofanirwa-kutamba yevatambi veese mazera.
Zvakanakisa Mitambo Yekumhanya
Mitambo yemitambo mienzaniso inozvitsanangudza. Dhiraivha imwe mhando yemotokari (kana chimiro) uye rova ​​komputa kana vamwe vatambi kusvika pamutsetse. Zvakareruka zvakakwana. Pane dzimwe sarudzo dzakanaka kunze uko, sezvo ichi chiri chimwe chinyorwa chinoshandura zvakanaka parunhare.
Aspahlt, refu-yakamira mobile racing zita, rova ​​yayo 9th iteration, kana uchikwanisa kuzvitenda. Inofungidzirwa imwe yemitambo yekumhanya, Asphalt inoita basa rakakura rekusundidzira mafoni emazuva ano neayo repetoire ejaya-anodonhedza hypercars. Chinangwa chikuru ndechekuva mujaho wemujaho wemumugwagwa, saka ndinovimba une adrenaline kupindwa muropa kuti uzvione iwe kusvika iko kumagumo. Iwe unoganhurirwa chete nema freemium mechanics ari kutamba anokukurudzira iwe kushandisa yakawanda.
Iyo inoratidzira yakanakisa mifananidzo, inoshamisa kutyaira kuteedzana, uye mamwe maziso ezviwitsi. Asphalt 9 ndiyo yakatarisa, kunyanya kana iwe uine chakakura kuratidza pafoni yako. Kune zvakare yakawanda mota yekusarudza kubva uye iwe unogona kuigadzirisa, futi! Kune marudzi anomirisana neAI uye nevamwe vatambi kuti urambe uchifarira uye uchivaraidzwa.
Iyo yemahara kutamba uye iine microtransaction. Ndizvo zvaunotarisira, zvese kuudzwa, uye hapana munhu anofanirwa kushamisika. Zvakadaro, Asphalt 9 yakanaka mukuputika.
Sangana yakakwira-octane chiito sezvo iwe uchikwikwidza migwagwa neyako kusarudza yemota. Gadzirira kukwira kwakasimba kunonakidza.
Kutora zvinhu zvishoma zvishoma kupfuura Asphalt 9 ndeye GRID Autosport. Dhairekodhi yechitoni inoitwa nevanhu vanoshamisa paFeral Interactive (inonyatso kuzivikanwa munharaunda yeLinux yemitambo), Grid inoratidza kudzora-kudonhedza magirafu, kunakisa kutyaira mutambo, uye zvinoshamisa zvinonakidza.
Mari yakakwira yekupinda, pamwe, asi iko kutenga kamwe uye kuita dhiri. Iwe unototora ese maDLCs akaisirwa. Kune yako $ 10, iwe unokwanisa kuwana mota zana nemamepu zana ane akawanda kutonga uye zvinonetsa sarudzo kuti zvienderane nemutambo wako wekutamba. Ndiwo mutambo wakasimba kwazvo uye Feral inongotsigira mafoni mashoma. Kana isingawanikwe kwauri muGoogle Play Store, foni yako pamwe haigone kuibata.
Grid inoitirwa kumhanyisa mutambo vanofarira, kunyanya avo vakaneta nema freemium matekiniki, senge iwo aunowana muAsphalt 9. Pane chimwe chinhu chingataurwe pamutengo wepamusoro wekutanga mutengo.
Tarisa uone ichi chiteshi chemafoni cheAAA koni yekumhanyisa mutambo uye ushamiswe. Haingori yekunaka chete, asi inorongedza mutoni yemutengo wemadhora gumi. Race kune zvirimo pamoyo wako.
Hapana runyorwa rwemitambo yemijaho ingave yakakwana pasina Mario Kart Tour, kune zviri nani kana zvakaipa. Izita remhuri kana zvasvika pamitambo yemijaho, Mario Kart ndiye mambo akamira kwenguva refu werudzi. Pakazosvika nharembozha kwete kare kare, pakave nemufaro wakawanda. Izvo zvakazoshatiriswa neimwe yeNintendo maitiro enhare, asi iyo ndeyeimwe nguva.
Iko hakuna zvakawandisa kutaura nezveKushanya kunze kwaiyo Mario Kart. Kumhanyisa newaunofarira hunhu mumamepu akafuridzirwa nemaguta chaiwo-epasirese uye uwane madhiraivha matsva, makarati, uye mabheji. Iko mahara kutamba ne microtransaction, hazvo.
Mario Kart Tour ndiyo nharembozha yeanokudzwa, akareba akamira mujaho franchise. Zviri zvimwe zvezvaungatarisira ne mobile monetization inokandirwa mukati meyero yakanaka.
Iti iwe unofarira mitambo yemijaho, asi mota uye vatuni vekatuni haisi yako chinhu. Ipapo pamwe iwe unowana Riptide GP: Renegade kune kwako kufarira. Iko kwakasiyana nemimwe mitambo yemijaho ndeyekuti uri pane remangwana, yakakwira-mhanyisa hydrojets. Panzvimbo pemugwagwa kana chimwe chinhu chakafanana, iyo nzira yemvura ndiyo nzira yako. Ndisayine.
MuRenegade, iwe wakadzingwa kubva mumutambo weRiptide GP uye pachinzvimbo iwe unofanirwa kuita kuti kurarama kwako zvisiri pamutemo kumhanya. Simba kuburikidza nemvura yemuguta, matongo akazara, uye nezvimwe zvese uchidzivirira mapurisa. Iwe uchavhura mota nyowani iyo yakareba iwe yaunotamba, pamwe neatsva maitiro ekugadzirisa. Tora vatenzi vanonakidza uye uvake vashandi vako.
Kune zvakare epamhepo 8-man multiplayer nhangemutange iwe kuti uise hunyanzvi hwako kuyedza. Iwe unogona kuita zviitiko zvebhodhi, zvakare, uye kunyangwe yemukati kupatsanura-skrini. Iwo mutambo wakawanda wemadhora matatu uye wakanaka kune vese vateveri vemitambo yemijaho.
Sangana nekunakidzwa kweisiri pamutemo mvura yekumhanya neRiptide GP: Renegade. Enda zvine hukasha uye ita rako rako basa, kana enda online kukwikwidza vamwe.
Ini ndakarerekera zvishoma pano, asi ini ndakakurira naSonic iyo Hedgehog. Saka pandakaona Sonic Forces, ndakabva ndangoshamisika. Kunyange ini ndisina kumbopinda muTimu Sonic Mujaho kana Sonic & Sega Yese Nyeredzi Mujaho, ini ndaifarira maFosi nekuti anotora mhuka dzinomisikidzwa kubva mumakarts kuenda kumakumbo avo maviri.
Nepo zviri kuseka kuona Big the Cat ichienderana neShadow, uchiri mutambo unonakidza uyo unotendera iwe kutamba waunofarira hunhu (kana uchinge waavhura ivo) uye uchimhanyisa vamwe vanhu. Kune zvakawanda kwazviri pane kungomhanya, zvakadaro. Zvakawanda sezvaungawana muna Mario Kart, unogona kudzora vadzivisi vako nemisungo, unzvenga iwo avanokusiira, paunenge uchiedza kuzviisa kumutsetse wekutanga.
Iyo yese cast yevatambi iri pano, asi mazhinji anofanirwa kuvhurwa kutanga. Apa ndipo pandinokuudza kuti mutambo wakasununguka kutamba, asi unoratidza ma microtransaction ekuvhura mavara matsva uye kugona. Zvinosuruvarisa kuona Sonic ichiita mari seizvi, asi ini ndinonakidzwa nemutambo wepamoyo.
Sonic uye shamwari vanouya kune nhare zvakare, ino nguva yekuzvirovera kunze mumakwikwi ekumhanya. Ita nepaunogona napo kudzora vadzivisi vako nekuti ivo vanenge vachiita zvakafanana kwauri.
Zvakanakisa Mitambo Yemitambo
Iyo yechokwadi heyday yemitambo mitambo pa Android yaenda kare. Mazhinji mazuva ano haana kukodzera nguva yako. Zvisinei, pane mienzaniso mishoma inopenya zvinomira pakati pechaunga, kunyangwe kana zvichisanganisira zvakajairika freemium nonsense.
Australia Open Game
Uyu ndiwo mutambo wepamutambo wetennis wandakawana weApple. Yakagadziridzwa neBig Ant Studios yeTennis Australia kubatsira kusimudzira iyo Open Australia, iyi yemahara zita rinopa nhamba inoshamisa yakasimba yesarudzo yemutambo. Unogona kutamba mutambo unokurumidza, rova ​​mutambo weAO kuti uzarure zvimwe zviitiko zveGrand Slam, kana kutamba mamiriro emabasa neako akajairwa mutambi.
Izvo zvinogadziriswa zvinodzora zvinomira pachako mutambi wako kuti adzore mapfuti ane ma swipes anoshandiswa kuita akasiyana maitiro, asi panezve marongero emamwe matanho ekumberi ekudzora. Asi nekunaka kwako nguva, zvirinani kupfura kwako kuchave. Kuomerwa kunowedzera paunoramba uchienderera, zvinoenderana nemitambo yemitambo-yemitambo.
Nakidzwa nemimwe yemitambo yakanaka kwazvo yetenisi pane Android iri remahara zita. Gadzira yako mutambi uye tora kumutambo weAO kana ingotamba mutambo unokurumidza.
Konami's raipembererwa nhabvu (nhabvu) franchise yadzoka muna2020 neakagadziridzwa madhiraibhu ekudzora uye sarudzo dzemuno neicho chaicho-nguva online mitambo inopesana neshamwari kana vatorwa Izvo zvese chikamu chemusimudziri chinotarisa kutora uyu nhabvu nhabvu mutambo munzvimbo yeEsports nemakwikwi epamhepo mutambo unoteerera uye unopa mubayiro.
Ehe, pane zvakawanda. Iyo Inspire system inoita kuti iwe, mushe, kurudzira uye / kana kukurudzira maatambi evaunotamba nawo, uchiwedzera matsva matsva ekuomarara. Zvese izvi zvinotarisa pane yemhando yepamusoro yemitambo ruzivo inofanirwa kukupa iwe mutambo unozvisarudzira wega kwauri uye yako yekutamba. Ndingati chakanyanya kudzikira ne eFootball PES 2020 ndechekuti ndeimwe mutambo we freemium mutambo.
Kana iwe uchida bhora, ipapo Konami anga akufukidza. Nakidzwa nazvino kudhirowa madhiraivha, iyo Refire system, pamhepo macomputer, nezvimwe.
Kunyangwe inogona kunge isiri iyo inonyanya kudiwa muenzaniso, Madden ndiyo inozivikanwa nhabvu nhabvu mutambo nhevedzano, kunyangwe paApple. Iyo mobile vhezheni yakasununguka kutamba, asi ine zvese zvidimbu zve freemium marara ayo EA aigona kukanda pairi. Tiri kutaura zvakapambwa mabhokisi, kushambadzira, microtransaction, nezvimwe zvakadaro.
Nehurombo, hapana zvimwe zvakawanda kana zvasvika kunhabvu paApple. Iyi ndiyo chete nzira yekutamba seyako kana neyaunofarira vatambi uye zvikwata. Yako nguva, iwe unowana kukwikwidza kutamba, inesimba nhabvu mwaka, uye matsva maitiro ekuvaka yako Gameplay maitiro akatenderedza. Kune zvakare co-op modhi yekuti iwe ubatsire shamwari dzako mumwaka yavo kana kuti ivo vakubatsire.
Madden NFL Nhabvu Nhabvu inotonga yakakwirira pakati pevashoma playable American Nhabvu mitambo iripo for Android. Inouya neyakajairika freemium mapako, zvakadaro.
MLB Mapfumbamwe Innings 2020
MLB Nine Innings yakaona zororo ra2020 pamusoro peiyo 2019 vhezheni. Kana iwe uri mu baseball, uyu ndiwo mutambo wako (pa Android, zvakadaro). Iyo inoratidzira ese 30 MLB zvikwata zvine 1,700 vatambi uye roster yakagadziridzwa kune vese 2019 mwaka vatambi. Unogona kutarisira yakazara 3D mifananidzo uye inotsvedza Gameplay yeakanakisa chiitiko.
Iko kune zvakare sarudzo yeiyo-ruoko-ruoko maitirwo ekuti kuitisa pafoni yako kuve nyore. Kwete chete iko kwekutamba, asi iwe unogona kusarudza kungotamba kukanganisa kana kudzivirira, chero chinokodzera zvaunofarira. Unogona kuenda kunopesana nevamwe vatambi pasirese pasirese Akarongwa Hondo, Clutch Hits, uye Kirabhu Hondo modhi. Kana kunamatira kuLigi Mode, chero ichikufadza. MLB Nine Innings 2020 yakasununguka nekutenga kwe-mu-app.
MLB 9 Zvigaro
Iyo yekuenda-kune baseball mutambo weApple, MLB Nine Innings 2020 inoratidza zvinhu zvese kubva paiyo 2019 vhezheni, asi yakagadziridzwa ye2020. Zvikwikwidze iwe kana vamwe mune dzakasiyana siyana modes.
NBA 2K20 ishoma isingawanzo mitambo yemitambo yeApple iyo isingavimbe nema microtransaction uye loot crates, izvo zvinobva zvangoita mutambo wakanaka, mumaonero angu. Iyo mifananidzo uye mharidzo iri pamusoro-notch uye enzanisa zvakanaka kune iyo console vhezheni.
NBA 2K20 inopa akawanda mutambo modes, senge iyo MyCareer Run nyaya modhi, iyo nyowani Mhanya Iwo Migwagwa, uye yakawedzera NBA Nhau dzekununura dzimwe dzakanakisa nguva muNBA Nhoroondo. Iwe unogona zvakare kutora chinzvimbo cheGM uye kubata timu, kusanganisira scouting uye marosters. Kune zvakare online yakawanda vatambi kuburikidza neLAN kana Google Play Mitambo ye5-pa-5 machisi. Unotowana rwiyo rutsva uye rutsigiro ruzere rwevatongi veBluetooth.
NBA 2K20 ndeimwe yemitambo yakanaka kwazvo pane Android. Kune $ 6 chete, iwe unowana yakawanda yemamodhes modes.
Zvakanakisa Augmented Reality (AR) Games
Chimiro chitsva chemutambo, AR inotora mukana wakasarudzika wemahara akavakwa mumafoni edu kutipa nzira itsva dzevaraidzo. Izvi zvinogoneka pane mamwe mapuratifomu, asi iyo yekuwedzera michina inodikanwa inobvisa vanhu vazhinji, ini pachangu ndakabatanidzwa, kubviswa. Nekudaro, neiyo diki yemagetsi muhomwe yako, unogona kuona nyika yeaugmented chaiyo yekutamba.
Harry Potter: Vashandi Vanobatana
Ndine chokwadi chekuti wakanzwa nezvaHarry Potter mune imwe nzvimbo. Icho chiitiko chezvemidhiya, pasina kupokana, asi mafeni vakave nenzara yemitambo yakanaka inovarega vapinde munyika yevaroyi. Chokwadi, iyo Lego Harry Potter mitambo yainakidza, asi iyi franchise inoshaya chero zviitiko zvine musoro zvemitambo.
Varoyi Unite inopidigura pamusoro wayo. Nepo vamwe mafeni vakamirira yakakodzera Potter RPG kana chimwe chinhu chakadai, zvirinani kuti mutambo uyu unogona kuvafambisa pamusoro. Funga nezve Pokémon Go, asi nevaroyi uye nezvimwe. Ndizvo chaizvo zviri kuitika pano. Zvinoda kumwe kuyedza kwemuviri kubva kwauri, asi zvirinani kuti ive neAdventure Sync izvozvi.
Harry Potter: Wizards Unite yakasununguka yekutamba ne-mu-kutenga kutenga. Zvinogona kunge zvisine clout iyo Pokémon Go achangobva, asi zvirokwazvo ine pfungwa dzevakawanda.
Tora zvaunofarira nezve Pokémon Go uye uise Harry Potter jira rekupenda pairi. Simuka, enda ufambe, uye uone zvakavanzika zvakavanzika zvakatikomberedza.
Kudzoka pakatangira Pokémon Go muna 2016, ini ndakasvetukira pabandi pamwe chete nemamiriyoni evamwe. Kubva ipapo, isu takaona fomati yakateedzerwa nemamwe mabrand vachitarisira kuwana mari pane iyo nharembozha yeAAR yemitambo iyo Niantic yakagadzirisa, asi hapana chakasvika padhuze nekuenderana nePokémon Go yetsika kukanganisa kana kugara simba. Kusvikira nhasi, ini ndichiri kungosangana nePokémon Go vatambi vari musango vachibata nekukuya kuti vaenzanise uye nekushandura Pokémon yavo, uye zvinonakidza.
Kunyangwe ini pachangu ndarega kutamba mutambo, nharaunda inoita senge yakasimba nakare pamwe nevakagadziri vemitambo nguva dzose vachiwedzera zvirimo, uye zvemitambo zvinotsigirwa nemutambo- uye zviitiko zvehupenyu chaihwo zvevatambi kuti vatore chikamu.
Semuenzaniso, muna Zvita wapfuura Niantic akazopedzisira awedzera PvP battling system yakawedzera kugona kurwisa shamwari, dzavaizvidza ivo vekutanga trailer yemutambo. Iyo yazvino-mumutambo chiitiko muzhizha ino yaisanganisira Team Rocket Grunts ichiputika panzvimbo yese nekukutsiura iwe kuti urwe nekwavo Shadow Pokémon - iyo inogona kubatwa uchishandisa Raid Mabhawa.
Izvo zvakangonaka kuona uyu unoshamisa mutambo uchiramba uchikura nekukura uye ndosaka takaudzazve kune yedu runyorwa rweakanakisa mitambo yeApple. Pokémon Go ichiri imwe yemitambo isingawanzoita iyo yakasununguka kutamba chero bedzi iwe uchida kuisa pabasa rekuita, nekutenga-mukati me-app kana iwe uchida kusimbiswa zvishoma munzira. Kunyangwe vanopokana kubva kune mamwe mabrands vari kuyedza kupinza mune iyi yakasarudzika nhare mbozha yemitambo, inonzwa seyechokwadi kune kwayo sosi yezvinhu uye inoramba ichikunda makwikwi maererano nemitambo yemhando dzakasiyana, chiyero, uye mukurumbira.
Yakanakisisa Pokémon Go yekuvhara iyo pa internet yakarova kumusoro kana shamwari pamusoro pe iMore yenhau dzichangoburwa, matipi, matipi, uye mamwe madhairekitori makuru ekukubatsira iwe parwendo rwako rwePokémon Go.
Pokémon Go ndiyo yaive mutambo wekutanga kuunza zvechokwadi mune inzvimbo-yakavakirwa chokwadi chemitambo kusvika kune yakatarwa. Icho chinoramba chiri chakanyanya kufefetera kunze uye kunakidza-kutamba-mutambo kubva kune genre 3+ makore.